(1) Android Phone မှာ Facebook သုံးမရသူများအတွက် | (2) Facebook Virus ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ ~ ITmanHOME
09:36 facebook, နည်းပညာ No comments
(1) Android Phone မှာ Facebook သုံးမရသူများအတွက် | (2) Facebook Virus ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ
Android ဖုန်းတွေမှာ Facebook ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ Facebook ကိုတန်းသုံးလို့ရပါတယ်။
တချို့ကျတော့လည်း Facebook ပုံလေးရှိပေမယ့် သုံးလို့မရဘဲ Browser ထဲမှာ www.facebook.com ဆိုပြီးရိုက်မှ Facebook သုံးရတာဗျ။ အဆင့်တွေများတာပေါ့နော်။ အဲလိုမျိုး Facebook ကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ သုံးချင်သူတွေအဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော် ဒီ Software လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ရင်တော့အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
အခုတစ်လော Facebook မှဝင်လာတဲ့ Malware ကတော်တော်လေးကိုဒုက္ခပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်
ကျနော်မသိတာလေးရှိလို့ မေးချင်လို့ ပါ....ခု ကျနော့စက်ထဲမှာ ဟိုနေ့ facebook က လင့် တခု ကိုသူငယ်ချင်းတယောက်က ပို့ ပေးလို့ဖွင့်လိုက်တာ yotube ထဲရောက်သွားတယ်..ဒီထဲကလိုပဲ
ပို့လာပါက မနှိပ်ကြရန်....... ၄င်းသည် virus ကဲ့သို့ အကယ်၍ နိပ်မိသွားပါကမိမိ စက်တစ်ခုခုဖြစ်
သွားမည်ဖြစ်သည်.......​ မနေ့ညက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ရပါတယ်။ window auto shut
လို့မရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Facebook မှ virus လာပုံက အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ hi. how are
you? Wanna laugh? :):) http://46.185.65.225/100000512​217469 အနီရောင် လင့်ကိုနှိပ်
လိုက်တာနဲ့ youtube ကဲ့သို့သော စာမျက်နှာအားရောက်သွားပီး သင့်ကို Latest FlashPlayer
တောင်းပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒါကို နှိပ်မိပြီဆိုပါကသင့်စက်ကျွန်တော်ပြောထားသလိုဖြစ်မှာ သေချာ
ထဲကို Virus ကစတင်ဝင်ရောက်သောင်းကျန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်...မဖြစ်သေးတဲ့သူများ သတိထား
သင့်ပါတယ်..အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မိမိတို့ကွန်ပျုတာမှာဝင်ရောက်နေတဲ့ Virus ရဲ့မူရင်းအစဖြစ်တဲ့ Facebook ကနေထပ်ပြီးမ၀င်ရောက်နိုင်တော့အောင် Facebook ကိုမိမိစက်ရဲ့ Host ထဲကနေ
Delete လုပ်ပါမယ်..Keyboard မှ Windows Logo + R ကိုနှိပ်ပြီး Run Box ကိုဖွင့်လိုက်ပါ.
.ပြီးရင် Run Box ထဲမှာအောက်ကအနီရောင်ကုဒ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ..။
အပေါ်ကပုံအတိုင်း Notepad ကိုဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်အပေါ်ကပုံမှာမြင်ရသလို 102.54.94.97
rhino.acme.com # source server လိုမျိုး Facebook.com ကိုရှာပြီး
အပေါ်ကအဆင့်အတိုင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ Registry Editor ထဲမှာသွားပြီးတော့ရှင်းပါအုံးမယ်..။Run
Boxကိုဖွင့်လိုက်ပါ..။ပြီးရင် Run Box ထဲမှာ Regedit လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ..။ဒါ
ဆိုရင်Registry Editor ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်..ပြီးရင် HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE
>Microsoft > Windows > Current Version > Run အထိအဆင့်ဆင်သွားလိုက်ပါ..
လာ ပါလိမ့်မယ်..ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ Value Data တန်ဖိုး “c:\_windows\_mstre6.exe” ကို Delete
လုပ်လိုက်ပါ..။ပြီးရင် OK ပြန်ပေးလိုက်ပါ..။Registry Editor ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။Value Data တန်ဖိုး
Delete လုပ်ပါမယ်..ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ Registry Editor ကိုဖွင့်လိုက်ပါ...ပြီးရင်
Credit ko pyae phyo